I-Best Trampoline Yezingane, i-55 ”I-Mini Trampoline Yezingane ene-Enclosure Net ne-Safety Pad, I-Heavy Duty Frame Round Trampoline ene-Zipper Eyakhelwe ngaphakathi Yomkhiqizi Wangaphandle Wangaphandle nefektri | Ukudla
Izingane Trampoline, 55 ”Mini Trampoline Yezingane ezine-Enclosure Net ne-Safety Pad, Heavy Duty Frame Round Trampoline ene-Zipper eyakhelwe ngaphakathi ye-Indoor Outdoor
I-Kids Trampoline- Ukugxuma kuyindlela enhle yokuthuthukisa amakhono amakhulu wezimoto nokuxhumana ezinganeni ezincane KAKHULU zilungele lapho umndeni nabangane nezingane zivakashela. Le trampoline yezingane ilungele izikhala zangaphakathi nangaphandle.
I-Trampoline Efanelekayo Yezingane- I-Lbla 55 ″ trampoline inconyelwa kakhulu izingane ezineminyaka engu-3 nangaphezulu ukuze zishaye ngezindlela zazo ukuze zijabulele isikhathi sazo sokuzijabulisa. Ilungele ukuphepha, ukuzijabulisa komndeni, ezemidlalo kungenye yezindlela ezinhle zokususa izingane kulawo madivayisi kagesi nangaphandle ukuze zishise amandla.
Azikho Izikhala & Amapali ahlanganisiwe Okokuzijabulisa AmaTrampolines- Uma ufaka inetha lokuphepha ethintwayo ethambile, sebenzisa inetha lezintambo eliphephile kumethi wokugxuma, lixhuma yonke indawo ezungeze isikhala sokugxuma esikhaleni, ngakho-ke lapho umnyango uvalekile, ayikho indlela yokuwa endaweni yokugxuma. Izigxobo ezi-6 ziza ne-foam padded. Lokhu kuvikela ukuklama kunika izingane okokuphela ekugcineni
I-Trampoline ene-Enclosure - Umnyango ozimele owakhelwe ngaphakathi ulungele izingane zakho ukungena nokuphuma. Uziphu osemnyango unikeza nokuvikelwa okubili ngenkathi bedlala ngaphakathi.
I-Easy Set Up Indoor Outdoor Trampoline-Le trampoline kulula kakhulu ukuyihlanganisa.Iza nawo wonke amathuluzi adingekayo ukuhlangana.
Ubukhulu bephakheji: 29.4 x 12.4 x 10 inches; 25.15 Amakhilogremu
Usuku Lokuqala Lutholakala: Disemba 9, 2020
Imininingwane yekhwalithi ephezulu
Ukotini we-EPS Pearl
Ikhava le-PVC elithambile futhi eliqinile
Ipayipi lensimbi elijiyile
Langaphambilini I-LBLA Trampoline Yezingane, Ikhava Elimboziwe Lezokuphepha Elincane I-Bungee Rebounder Indoor / Outdoor Kids Trampolines Amathoyizi Ezemidlalo Ezingane
Olandelayo: I-Arkmiido Kids Easel, i-Adjustable Height Double Sided Easels Whiteboard & Chalkboard Standing Easel nge-Chalkboard kanye ne-Dry Erase Woodels Easels Multiple-Use Easel for Kids and Tollders
Imoto ye-Cartoon Remote Control, i-Electric Radi ...
I-BeebeeRun Pirate Action Figures Playset, i-Educati ...
Ukwenza i-12 koku-1 Umsebenzi Womsebenzi Omatasa Ukufunda i-Cu ...
Izingane Sippy Cup Water Cup Funda Ukuphuza Cup ...
I-LBLA Umsizi Wokuhamba Ngosana Ophathwayo, Ingane W ...
Indiza Toy nge Sound and Light, Ezokuthutha Imoto ...